Iskahorimaad qasaare geystey oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose - Jowhar Somali news Leader
Home News Iskahorimaad qasaare geystey oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose
Wararka ka imanaya Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegayaan in dagaal xoogan oo u dhexeeyay Ciidanka dowladda Federaalka iyo dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab uu ka dhacay Baar Sanguuni.
Dagaalkaas ayaa waxaa uu ka dambeeyay, kadib markii Al-shabaab ay waaberigii hore ee saakay ay weerar ku qaadeen Saldhig Ciidanka Dowladda iyo kuwa Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Baar- sanguuni, waxaana halkaas ka dhacay dagaal socday muddo ku dhow laba saacadood.
Dadka deegaanka Baar-Sanguuni ayaa soo weriyay inay maqlayeen dhawaqa rasaas xoogan oo labada dhinac ay isdhaafsanayeen, wallow markii dambe dagaalka uu is iskiis ah u joogsay.
Al-shabaab warara ay qoreen baharooda dhinaca qadka ayaa waxaa ay ku sheegeen inay ay gudaha u galeen Saldhiga ay ku sugan yihiin Ciidamada Bangaraafta ee Mareykanka tababaray, isla markaana dagaalka uu ka dhashay Khasaaro dhimasho iyo dhaawac.
Weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Saraakiisha Ciidanka dowladda Federaalka iyo kuwa Maamulka Jubbaland oo ay uga hadlayaan dagaalkaas ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanka Baar- sanguuni.